Ogaden News Agency (ONA) – Is-bahaysiga Difaaca Xuquuqda Aadanaha – Human Rights Advocacy Group (HRAG) oy 7ba qawmiyadood ku kulmeen
Is-bahaysiga Difaaca Xuquuqda Aadanaha – Human Rights Advocacy Group (HRAG) oy 7ba qawmiyadood ku kulmeen
Waxaa shir balaadhan isugu yimid Jaaliyadaha Todoba Qawmiyadood oo ku heshiiyay inay ka hortagaan ku xadgudubka Xuquuql-Insaanka ka jira Itobiya. Todobada Jaaliyadood ee shirka isugu yimid ayaa kala ahaa; Benshangul, Gambela, S.Ogadenya, Oromo, Shakacho iyo Sidama.
Shirka oo si habsami iyo guul ah ku soo dhamaaday ayaa waxaa lagu go’aansaday qodobo muhiim ah oo wax weyn ka tari doona ka hortagga xad-gudubka lagu hayo shucuubta ay matalaan jaaliyadahan. Gabagabadii shirkas ayay soo saareen bayaan ay saxaafada u qaybiyeen.
Wuxuu bayaanka Saxaafadeed tibaaxay in iyagoo matalaya ah shacuubta todobada qawmiyadood ee kala ah; Benshangul, Gambella, S.Ogadenya, Oromo, Shakacho iyo Sidama ay si wadajir ah ugu heshiiyeen inay dhisaan Isbahaysi ay ugu magac dareen – Human Rights Advocacy Group – isbahaysigaa oo u ololeyn doona sidii loo difaaci lahaa xuquuqda aadanaha ee qawmiyadahooda iyo guud ahaan shucuubta ay xukuumadda Itobiya ku hayso cadaadiska iyo xadgudubka.
Waxay ku balameen xubnaha ku kulmay isbahaysiga in aanay ka daalin u ololeynta xuquuqda shucuubtooda iyagoo isugu gayn doona awooda jaaliyadaha Isbahaysiga HRAG siday banaanka soo dhigi lahaayeen dambiyada ay xukuumadda Itobiya ka galayso dadweynaha aan waxba galabsan een iska difaaci karin tacadiyadda ay ciidamada Itobiya u gaysanayaan, sida dhul boobka, barakicinta, xasuuqa, toogashada aabayeel la’aanta ah, kufsiga baahsan, xabsi wadareedka iyo u adeegsiga mucaawanada hub lagula gorgortamo dadka tabaalaysan.
Hawlaha uu qaban doono isbahaysiga HRAG waxaa ka mid ah ururinta xogta iyo diiwaangalinta tacadiyada, ka dibna ay dawladaha caalamka iyo haya’adaha difaaca xuquuqda aadanaha, Midowga Afrika AU, Qaramada Midoobay QM, iyo Midowga Yurub EU u soo bandhigaan xadgudubka lagu hayo shucuubtooda.
Isbahaysiga HARG waxay xaqiijiyeen in xaaladda Itobiya ay meel xun mareyso, taasoo hadaan si dagdag ah wax looga qaban ku dambayn doonta meel xun iyo dhibaato aan horey uga dhicin Afrika. Sidaa daraadeed, wuxuu Isbahaysiga ugu baaqay Bulshada Caalamka, gaar ahaan dawladaha deeqda bixiya, MA, iyo QM iyo MY inay Maamaulka Itobiya kala xisaabtamaan xadgudubka ay ku hayso Xuquuqda Aadanaha.
Ugu dambayntii waxay ugu baaqeen dhamaan shucuubta Itobiya inay u midoobaan oy gacmaha isqabsadaan siday ugaga hortagi lahaayeen gacanku-dhiigalayaasha.
waxay u rajaynayaan inay helaan Cadaalad dhamaan shucuubta iyo Qawmiyadaha.